निकै सुन्दर छिन् ‘पुष्पा’ अभिनेता अल्लुकी पत्नि, यो चर्चित जोडी बस्छ १०० करोड बढीको विलासी बंगलामा – Annapurna Post News
निकै सुन्दर छिन् ‘पुष्पा’ अभिनेता अल्लुकी पत्नि, यो चर्चित जोडी बस्छ १०० करोड बढीको विलासी बंगलामा
June 4, 2022 sujaLeaveaComment on निकै सुन्दर छिन् ‘पुष्पा’ अभिनेता अल्लुकी पत्नि, यो चर्चित जोडी बस्छ १०० करोड बढीको विलासी बंगलामा
‘पुष्पा’ फिल्मको अपार सफलतापछि साउथका चर्चित सुपरस्टार अल्लु अर्जुनको लोकप्रियता दक्षिण भारतमा मात्रै नभई विदेशमा पनि उत्तिकै बढेको छ । कयौं फिल्महरु पर्दामा सुपरहिट साबित भएतापनि ‘पुष्पा’ले उनको लोकप्रियता ह्वात्तै बढाएको हो ।
लक्जरी जीवन बिताउन मनपराउँने उनको करोडौको बंगला रहेको छ भने करोडौका गाडी चड्छन् । ‘पुष्पा’को सिक्वेलका लागि १०० करोड भारु माग गरेका अल्लु अर्जुनको कुल नेटवर्थ ४७ मिलियन अर्थात् करिब ३५० करोड रुपैयाँ रहरेको छ ।
उनले एउटा फिल्मका लागि १४ देखि १५ करोड रुपैयाँ पारिश्रमिक लिने गरेका छन् । हैदरावादको जुबली हिल्समा रहेको विलासी बंगलामा बस्दै आएका उनको घर एकदमै सुन्दर ढंगले डिजाइन गरिएको छ, जुन ८ हजार वर्ग फुटमा फैलिएको छ ।
यसबाहेक उनको घरमा निजी पोखरी पनि छ । अल्लु अर्जुन आफ्नो श्रीमती स्नेहा रेड्डी र दुई छोरा–छोरीसँग उक्त घरमा बस्दै आएका छन् ।
उनीसँग रेन्ज रोभर, हमर एच२, रेन्ज रोभर भोग, जगुआर एक्सजेएल, भोल्भो एक्ससी९० टी८ एक्सेलेन्स जस्ता महँगा गाडीहरू छन् । उक्त कारहरुको मूल्य करोडौं पर्छ । साउथका सबैभन्दा महँगा कलाकारमध्ये एक उनको जीवन शैली देखेर नलोभिने सायदै होलान् ।
म साढे ३ लाखको जागिर छोडेर जनताको सेवा गर्न आएका हुँ, म आको ४ दिनभयो, मलाई काम गर्न दिनुस् : मेयर साह (भिडियो)
समर्थकहरुलाई चक्मा दिदै शीर्ष नेताहरुलाई नै झस्काउनेगरी नयाँ बाटोबाट राजनीतिमा रञ्जु दर्शनाको ईन्ट्री !
अभिनेता सुशान्तको स्मृतिमा रियाले बनाइन् सबैलाई भावुक म प्रत्येक दिन तिमीलाई मिस गर्छु !
सं वेदनशिल अं ग बढाउन धेरैले सल्लाह दिएको भन्दै अनन्या पाण्डेले खोलीन् अहिलेसम्म बाहिर नआएको रहस्य